Chelsea Oo Isku Diyaarinaysa Inay Aurelien Tchouameni Amaah Ugu Soo Celiso Monaco Marka Ay Kasoo Qaadato.
HomeWararka CiyaarahaChelsea oo isku diyaarinaysa inay Aurelien Tchouameni amaah ugu soo celiso Monaco marka ay kasoo qaadato.
November 18, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka France, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay isha ku heyso Aurelien Tchouameni inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga bisha Janaayo ka hor inta aysan amaah ugu celin Monaco inta ka harsan xilli ciyaareedka 2021-22.
21-sano jirkaan ayaa qaab ciyaareed cajiib ah ku soo bandhigay heerka kooxeed xilli ciyaareedkan, isagoo dhaliyay labo gool 20 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan, halka uu si joogta ah uga ciyaaro France tan iyo markii ugu horeysay ee uu saftay bishii September.
Kooxo dhowr ah oo hormuud ka ah Yurub, oo ay ku jiraan Manchester United iyo Liverpool , ayaa la rumeysan yahay inay xiiseynayaan saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe sanadka soo socda.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay TEAMtalk , Chelsea ayaa kor u qaadaysa baacsiga xiddiga reer France, waxaana laga yaabaa inay Monaco ku tijaabiso inay iibiso iyagoo u soo bandhigaya inay amaah ku sii joogo kooxda Ligue 1 inta ka dhiman xilli ciyaareedkan.
Ciyaaryahanka khadka dhexe, oo xirfadiisa ka soo bilaabay Bordeaux, ayaa weli seddex sanno ka hartay qandaraaska uu kula jiro Monaco.